Madaxwaynaha oo xarriga ka jaray xarunta Ciidanka Cirka (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxwaynaha oo xarriga ka jaray xarunta Ciidanka Cirka (Sawiro)
Madaxwaynaha oo xarriga ka jaray xarunta Ciidanka Cirka (Sawiro)
Ugu hor hadlay taliyaha ciidamada cirka ee dowladda Soomaaliya, Gen. Maxamuud Shiikh Cali waxa uuna ku dheeraaday taariikhda ay soo martay xarunta ciidamada cirka oo uu sheegay in ay aheyd meeshii ugu horeysay ee lagu aasaasay ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale taliyaha waxa uu bogaadiyay dhamaan dadkii gacanta ka geystay dib u dayactirka xarunta ciidamada cirka oo in muddo ah aanan lagu shaqeyn.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka, Maxamed Aadan Axmed oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha xarunta ciidamada cirka ay tusaale u tahay horumarka ciidamada qalabka sida uu ka gaaran dib u howlgalinta goobihii taariikhiga ahaa ee ay ku shaqeyn jireen ciidamada dowladda, waxa uuna taliska ciidanka cirka kula dar daarmay in ay ka soo dhalaalaan howlaha baaxadda leh ee ay u haayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed maadaama ay heleen xarun ay ku shaqeeyaan.
munaasabadda waxaa soo xiray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xassan Sheekh Maxamuud, waxa uuna ugu horeyntii u mahad celiyay dadkii ka qeyb qaatay dib u dayactirka xarunta ciidamada cirka oo uu sheegay in ay ka muuqatay bur bur xoogan, waxa uuna taliska ciidamada cirka kula dar daarmay in ay dar dar galiyaan howlaha baaxadda leh ee ay u hayaan dalka iyo dadka, si dalka looga samata bixiyo dhibaatada mudada dheer soo jiitameysay.
Previous articlePuntland oo bilowday diiwaan-galinta musharixiinta Aqalka Hoose
Next articleDiiwaan-galinta musharixiinta Aqalka Hoose oo Cadaado ka bilaabatay